सरकार ढल्ने भएपछि संसद विघटन गर्ने ओलीको तयारी, माओवादी कसरी अघि बढ्ला ? « Drishti News – Nepalese News Portal
सरकार ढल्ने भएपछि संसद विघटन गर्ने ओलीको तयारी, माओवादी कसरी अघि बढ्ला ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि संसद विघटन गर्ने चालमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले बताएका छन् । राजीनामा दिन्छु भनेर बाेले पनि ओली फेरि संसद विघटन गर्ने चालमा हुनसक्ने नेता पुनले बताएका हुन् ।
ओलीले राजीनामा दिएर सजिलै देशलाई निकास दिनेमा शंका रहेको उनले बताए । राजनीतिमा इमानदारीता देखाएको भए ओलीले अहिलेसम्म नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसक्नु पर्नेमा थियाे । तर, नैतिकहीन नेतासँग त्याे आशा गर्न नसकिने उनकाे भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बस्दै
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ । नेता बर्षमान पुनले नयाँ सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा आज बस्ने बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
आजको बैठकमा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पछि छलफल हुने पनि नेता पुनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले अझैसम्मपनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आज ओली सरकारलाई दिएको समर्थन लिए नेपाली राजनीतिले नयाँ यात्रा भने तय गर्ने बताइएको छ । संविधानअनुसार ओली सरकारले समर्थन गुमाएको एक महिनाभित्र बहुमतको समर्थन पाएको सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक मिनेट पनि आफू पदमा नबस्ने भनेर शनिबारै एक कार्यक्रममार्फत बताएका छन् । ओलीले संसद विघटन गरेपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष मिलेर ओलीलाई हटाउनका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहल गरिरहेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको (नेकपा) लाई अवैधानिक ठहर गरी दुई पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि भने एकीकरणमा समस्या आएको थियो ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी छुट्टाइदिए पनि माओवादीले भने अहिलेसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिंदा पनि प्रश्न उठ्दै आएको हो ।
नयाँ गठबन्धनका लागि दलहरूबीच संवाद सुरु
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यसबीच नयाँ गठबन्धनका लागि दलहरूबीच संवाद पनि सुरु भएको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नयाँ सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको अर्को दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र जसपा नेताहरूसँग संवाद थालेका आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । दाहालले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंहलगायत नेतासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले स्पष्ट धारणा बनाई नसकेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तत्कालै अर्को सरकार बन्ने/नबन्ने अनिश्चित छ ।